Miankina aminao irery ihany ny fiainanao – Blaogin'i Voniary
Raha ny marina, ny zavatra holazaiko eto amin’ity lahatsoratra anio ity dia tsy zavatra vaovao amintsika rehetra fa zavatra efa fahita andavanandro ary efa iainan’ireo olona sasany ka mitarika azy hanana hafaliana sy fiadanana indrindra amin’ny fanatontosana ny tanjona rehetra iriany. Araka ny lohateny voalaza etsy ambony, dia tiana sahady ny mampafantatra dieny mialoha fa maro ireo milaza fa ratsy, tsisy ilaina azy eto amin’ny fiainana, ratsy vintana, sns… ka ireo antony maro ireo no mahatonga ahy tsy misalasala avy hatrany ny hanoratra an’ity sombin-dahatsoratra ity eto amin’ny Blaogin’i Voniary. Raiso an-tanana ny fiainanao araka ny voalazan’ny boky izay nosoratan’i Voniary, ary izaho kosa anio dia hilaza aminao hoe miankina aminao ihany ny fiainanao sy ny hoavinao. Koa manasa anao àry hamaky ity lahatsoratra ity hatramin’ny farany.
Ny olana tena mahazo antsika amin’izao fotoana izao.
Marina tokoa fa anatin’ny valan’aretina Covid-19 ny firenena rehetra eran-tany amin’izao fotoana izao saingy tsy izany ihany no tena mitranga ankehitriny. Betsaka ary tena miha-maro mihitsy amin’izao no lasa very toky, tsy mahafantatra ny tokony hataony, tsy mahalala ny tenany sy ny momba azy intsony. Anisan’izany ny tenako izay manoratra an’ity lahatsoratra eto ity androany, tsy nahafantatra intsony izay tena mety amin’ny fiainako sy ny hoaviko fa diso nijery loatra sy nanenina an’ireo zavatra efa lasa tany aloha tany.
Betsaka amintsika ankehitriny vokatr’ity valan’aretina ity no mihakivy sy mihatrotraka ka tsy mahalala intsony ny tena maha-izy-azy eto amin’ity fiainana ity. Betsaka amintsika ankehitriny ny mametraka ny fahadisoana nisy ho any amin’ny hafa. Betsaka amintsika ankehitriny, tsy mahafantatra intsony ny tena maha-izy-azy ka lasa manaonao foana sy miteniteny foana fotsiny ary manambany tena lava vokatry ny zavatra ianantsika ankehitriny. Ka raha ny tena marina izay, dia anisan’ny olana lehibe mifanaraka amin’ny valan’aretina Covid-19, ny olana rehetra zakaintsika sy eritreritra ananantsika izay zary manambany ny fiainantsika manontolo mihitsy.
Photo de zydeaosika sur Pexels.com
Ny azonao atao afahanao mandray an-tanana ny fiainanao indray
Tsy dia anisan’ny zavatra sarotra ity torohevitra omeko anao mpamaky ity. Zavatra tsotra no sady azo ampiharina tsara izy ity saingy ilaina fahavononana ara-tsaina kosa anefa. Mialohan’ny hilazako izany anefa, dia misy tantara kely ity entiko mampahafantatra tsara anao ny tokony hatao.
Nisy tovolahy iray hatramin’ny fanombohan’ity taona 2020 ity, dia tsy azo lazaina ho tena tompon’ny tenany firy intsony fa lasa manambany tena sy tsy dia mahafantatra ny lalam-piainana tokony halehany intsony. Nahatsapa tena ratovolahy fa toa irery izany, tsy misy olona resahina ka lasa na izay mba miresaka aminy dia nitantarany ny olany avokoa. Ny niafarany, tsy nisy nahasahy ny niresaka taminy intsony fa diso manambany tena loatra izy eo anatrehan’ireo manodidina azy ka vao maika nikorotana ho azy teo foana ny fiainany. Nisy ihany anefa, namany iray izay na dia efa nanomboka nankahala azy tamin’io toetrany io, niezaka ny nanampy azy sy nanoro azy ny lalana tokony halehany ihany. Ilay tovolahy anefa, toa vao maika toa hita soritra hoe miha-sarotra hatrany ny mifandray aminy isan’andro ka lasa niteraka hatezerana tanteraka tamin’io namany io izany ka namoahany karazana teny mahery taminy sy nilazany ny tena olan’io tovolahy io. Tamin’io fotoana io indrindra, vao fantatr’io tovolahy io tsara fa tsisy dikany avokoa ny zavatra nataony hatrizay tamin’ireo manodidina azy. Taorian’io resaka io moa dia saika tsy nety ny hiresaka tamin’izan’iza intsony io tovolahy io satria efa fantany hoe izy no fototry ny olana. Niresaka tamin’io namany io ihany moa izy na dia tsy dia niteny firy intsony aza.
Anisan’ny lesona lehibe voarain’io tovolahy io tamin’izany dia ny fahaizana manaiky ny tenany, ny fahaizana manaiky fa tsy voatery hamaly azy ny hafa, ny fahaizana manaiky ny fiainana iainany amin’izao, ny fahaizany manaiky fa mila faharetana ny zavatra rehetra. Ka izany ihany koa no hifampizarako aminareo eto dia ny fahaizana manaiky ny zava-misy sy ny lasa niainanareo rehetra ka tsy hametrahana olana sy nenina ny amin’izay rehetra efa vita tany aloha. Io tantara vao novakianareo teo ambony io moa, dia tsy inona fa tantaram-piainako izay manoratra ity lahatsoratra ity ihany.
Ilaina fitiavana ny fiainana
Anisan’ny zavatra voalaza foana izy ity matetika fa vitsy ihany ny tena mahavita manatanteraka izany. Tao anatin’io olana lehibe nentiko ho an’ny tenako io dia nijanona tanteraka tsy nahavita nanoratra intsony aho nandritran’ny fotoana maharitra be fa tsy nahatsapa intsony izany hoe tena fitiavana ny hanoratra izany. Tsy misy mandeha amin’izay tokony ho izy ny zavatra rehetra voasoratra nefa ankehitriny, tsapako ihany ny farany, fa ny fitiavana ihany no mitondra anao hahantanteraka tsara ny tokony hataonao rehetra. Ilaina fitiavana ny fiainana, ilaina fitiavana ny zavatra rehetra mitranga eo amin’ny fiainanao mba tsy ho lasa toy ny hoe fanerena fotsiny ihany ny hanaovanao izany.
Aza adino mandrakariva ny mitondra hafaliana
Tsy haiko ianareo raha mahatsikaritra izany fa raha ohatra ianao ka miaraka amin’ireny olona mpampihomehy sy mpitondra hafaliana amin’ny fiainanao ireny dia toa miramirana ho azy izany foana ny andronao. Kanefa ihany koa, ireny mpitondra hafaliana amin’ny hafa ireny dia toa maivamaivana aminy avokoa ny zavatra rehetra ataony. Ilaina tena ilaina ny mitondra hafaliana amin’izao fiainana izany, ary anisan’ny tena mahatsara ny fahasalamana ny hafaliana amin’ny olona rehetra ka izany no tokony mba hitondranao ny anjara birikin’ny hafalianao amin’ny hafa raha mbola afaka ny hitondra izany ianao.
Eto vao tena resahina ny tena fototr’ity lahatsoratra ity rehefa voateny avokoa ireo mety ilaina afahana miditra amin’ity. Betsaka manko ny milaza sy mahasahy miteny eny amin’ny fiarahamonina eny fa miankina amin’ny vadiny, miankina amin’ny olon-tiany,sns… ny fiainany. Kanefa, ireny manankina ny fiainany amin’ny hafa ireny ve dia tena manana ny hafaliany tokoa amin’izay zava-misy iainany ? Ireny manankina ny fiainany amin’ny hafa ireny ve tena malalaka amin’ny safidy tokony hataony mba hanatsarana ny fiainany ? Ekena fa hoe tsara ny mifanampy, ny mifampatoky, ny mifampitantara ny zava-mitranga rehetra misy, nefa tsy io olona atokisanao io mihitsy no afaka ny hisafidy eo amin’ny toeranao sy ny fiainanao manokana. Betsaka no tsy mahalala fa entin’ny fisainana fotsiny hoe io no atokisako ka izay rehetra lazainy dia tsy maintsy arahiko avokoa. Mbola tokony miankina amin’ny safidinao avokoa izany fa raha mahasoa anao io, tsy maninona raha arahinao, fa raha mety tsy mitondra soa ho anao kosa, inona no tokony hanarahanao izany ? Miankina Aminao irery ihany ny safidy rehetra mianga amin’ny fiainanao ka tsy misy olon-kafa afaka ny hisafidy izany eo amin’ny toeranao ankoatra anao irery ihany afahanao manova ny hoavinao iray manontolo.
Farany, ekena fa betsaka amin’izao no sahirana sy mety ho trotraky ny fiainana ka eto am-pamaranana dia manentana ny rehetra aho mba hifanampy sy hifanohana. Tsy voatery hoe vola na sakafo ihany, fa eo ihany koa ny vavaka, ny firesahana, ny fanolorana soso-kevitra,sns… Maro ireo olona tena mila izany amin’izao fiainana izao, ary mety tsy tsapanao fa eo akaikinao ihany izany olona izany, mety tsy tsapanao ny hamafin’ny olana iainany ankehitriny kanefa tsara kokoa ny mifanampy amin’izao fiainana izao mba hitondrana hafaliana sy fahasambara ary fiadanana ho an’ny tsirairay. Ary farany tena farany, raiso an-tanana ny fiainanao ka ento araka ny hitiavanao azy sy araka ny mety mahasoa anao hatrany.
développement personnel gasy, fampivelarana ny isam-batanolona, fampivelarana ny maha-olona, fampivoaran-tena, fampivoarana ny maha-olona, miankina aminao ny fiainana, raiso an-tanana ny fiananao, safidy
Un commentaire sur “Miankina aminao irery ihany ny fiainanao”
Ping: Ny fianarana no lova tsara indrindra – Fianarana ny fiainana – gasy mblaogy